मानव जातिसँग कोरोनाको आतंक किन ? - Ratopress::रातो प्रेस
विश्वनै आक्रामक बनाएको कोरोना लाई केको रिस उठेको हो ? यसले आम मानिसमा यो प्रश्नको प्रतिउत्तर दिन सकेको छैन अथवा मुलुकमा भई रहेको फोहोरो खेल, होडबाजी, व्यक्तिवादी डाहा, अन्याय अत्याचार र भ्रष्टनीति हो वा अन्य कुनै । प्रकृतिलाई नै फोहोरो पार्ने गरि हुने गरेका कामको बदला लिएको पो हो कि अथवा पृथ्वी नै फोहोर भयो व्यक्ति व्यक्ति र मुलुक मुलुक बिच हुने गरेका द्वन्द्वले ध्वस्त हुनबाट बचाउन पृथ्वी माथी भई रहेको फोहोरी खेलका कारण पृथ्वीले अस्त्र प्रहार गर्दैछ कि सम्पुर्णलाई ध्वस्त पारेर शुन्यबाट सुरु गर्न खोज्दै छ कि भन्ने लाग्न थाल्यो ।
पृथ्वीले नियाली रहेको र बेला बखतमा कहिले भुकम्प, कहिले बाढी पहिरो र कहिले भुक्षयले साङ्केतिक आक्रमण गर्दै आएको छ । मानिसले यति हुँदाहुँदै पनि सचेतता नअपनाउँदा प्रकृतिसँग पैठेजोरी खेल्दै आउनुले साच्चिकै पृथ्वी रिसाएकै होकि जस्तो पनि लाग्ने गरेको छ । जताततै लडाइँ र आपसी खिचातानीले पृथ्वीमाथी मानिसले गरेको चरम लापरबाहीका कारण अहिले फेरि कडा अस्त्र प्रयोग गरेको छौ । तिमीलाई जित्ने हाम्रो सामर्थ्य कहाँबाट पत्ता लगाउनु, बढिनै मुस्किल परेको छ ।
हामीलाई साँच्चै अप्ठ्यारोमा पार्ने तिम्रो लक्ष्य नै त नहोला । सितको थोपा जस्तो तिम्रो निश्च्ल भावना माथी हामीले खेलवाड गरेर हिडेका रै छौ भने आफसमा लड्ने, असत्यको बाटो हिडेर फोहोर र दोहोरो नीति लिने बानी छोडौला बरु हामी । हे पृथ्वी तिमीमाथिको लापरबाही छौडेर स्वच्छ नीति अबलम्बन गर्ने छौ यो सब नगर ।
आम मानिसको आधा होस उडिसकेको छ अबत मुक्ति देउ ? कुनै अस्त्र बताईदेउ यो कोरोना नामको जीवाणु फ्याक्ने । मानवजाती त्रसित भई पृथ्वी तिमी माथी भएको गलत क्रियाकलाप बरु रोकेर अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार र आपसी असमझदारी त्याग्न तयार छ्न । जसरी बगैचामा फुलहरु गमलामा सजाएर राखिएको हुन्छ त्यसैगरी पुरै सामजालाई सजाउने आपसी भाईचारा व्यक्ति र मुलुकलाई समझदारीको बाटोमा हिडाउन तत्परताका साथ लाग्ने छौ । छोड ! कतिको अनाखमा ज्यान गयो, कति थुक्नुन निल्नु छन, कति अचेत भए । अब मानिसले पाठ सिकिसकेका छ्न समाजलाई सामाजिक एकता र राष्ट्रबाद तर्फ लैजान सक्ने गरि परिस्थितिलाई बुझी सकेका छ्न । अब प्रहार नगर मानवतावादी चरीत्र चित्रण हुनेछ । समाज र राष्ट्र हुँदै सिङ्गो मुलुकलाई नै सिङ्गारने मात्रै क्रियाकलाप हुने छ्न । कोरोना जस्ता भयानक अस्त्र त्यागेर आउ सम्झैता गरौं ।